Ciyaaraha | KONGOLISOLO
Qof walba wuxuu ku daawadaa waxyaabaha muraayadaha muraayadaha u gaarka ah; Waqti u haysataa inaad ku eegto waxyaabaha xitaa laba daqiiqo, kuma guuldareysan doontid inaad soo bandhigtid waxa ay kuu muujinayaan ee ku saabsan naftooda: waa maxay cunsuriyadda iyo wadaagga guud ee labadan sawir sawirka?
Posted By: KongoLisolowaa: July 14, 2020 12: 37 No Comments
Waxaa laga yaabaa inay u caddaato kuwa aan dheg jalaq u siin doonin, laakiin goobjoog kasta oo xog ogaal ah, waxay ogaan doontaa inay tahay "Afka". Eeyga iyo ninka, ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: July 10, 2020 14: 51 No Comments
Gadhka: sida magaca dhedig, kaliga, "Waa timo timo ah oo ka koreysa dibnaha sare ee ragga". Tusaale ahaan, waxaan dhihi doonaa: wuxuu bilaabay inuu ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug09 06: 53